श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने? (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने? (भिडियो सहित)
श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने? (भिडियो सहित)
admin December 10, 2020 भिडियो, समाज	0
सम्मानित भएपछी देवघाटमा श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा| श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने|श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा| श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने|
स्वेताले अगाडि लेखेहि छिनः अनत्वगोत्वा : मैले सिउँदोमा सिन्दुर भरें , हातमा सप्तरङ्गी चुरा लगाएँ अनी रङ्गिन पहिरन भित्र आफुलाई सजाएँ । मैले जिन्दगीको अर्को एउटा यात्रामा पाइला चालें । मेरो यो यात्रामा मेरा सम्पुर्ण इष्टमित्र , आफन्तजन , गन्यमान्य ब्यक्तित्व , शुभचिन्तक लगाएत मलाई सँधै साथ र समर्थन गर्ने मेरा संचारकर्मी मित्रहरुको सुवेक्षा र आशिर्वादको खाँचो छ ।
मैले सुरु गरेको जिन्दगीको यो अर्को अध्यायमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । मैले नेपाली सिने जगतलाई मेरो शिरको सिन्दुर जस्तै अझै उच्च स्थानमा पुर्‍याउनु छ । निर्माणाधिन माझिटोललाई आज सँजिएको बिहेको मण्डप भन्दा पनि अझै सजाउनु छ । मैले थालेका ब्यावसायहरुलाई मेरो हातमा चम्किएका चुराहरु जस्तै चम्काउनु छ ।
मैले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । थाती रहेका मेरा कार्यहरुमा थप उत्साह र उमंग बोकेर लागी पर्नेछु ।म थप शसक्त नारीको रुपमा तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत हुनेछु । आगामी दिनमा एकल महिलाको शसक्तिकरणमा केहि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । त्यस्लाई साकार बनाउनको लागी म प्र यासरत रहनेछु ।
अत : मलाई तपाइहरु सम्पुर्णको साथ , साल्लाह , सुझावका साथै शुभ-आशिर्वादको आवस्यक्ता छ । हिजोका दिनमा भन्दा पनि आगामी दिनमा मैले सबैबाट अझ धेरै माया, सदभाव र साथ पाउने आशा बोकेकी छु ।
बेहुलाबेहलुी जन्ती चढेको गाडी दुर्घटना, बेहुला बेहुलीसहित १३ जना यस्तो!
धु’मधाम बिहे गरेर ल्या’एकि श्रीमति २५ लाख लिएर प्रे’मीसँग फ’रार भएपछि लेखिन यस्तो चिठी… हेर्नुहाेस
आफ्नै श्रीमतीलाई ‘एसिड’ प्रहार गर्ने युवक पक्राउ
राजेश हमालका बुबाआमा भेटिए २० बर्षपछि राजेशले यसरी बोके, सुकुम्बासी भयौं भन्दै डाँको छाडेर रोए -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)